गिनीज बुकमा नाम लेखाउने ब्रह्मानन्दमसँग कति छ सम्पत्ति ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
गिनीज बुकमा नाम लेखाउने ब्रह्मानन्दमसँग कति छ सम्पत्ति ?
एजेन्सी । तेलुगु फिल्मका कमेडियन कलाकार ब्रह्मानन्दमले एक हजार भन्दा बढी फिल्म खेलेर गिनीज बुक अफ रेकडमा नाम लेखाइसकेका छन् । सन् २००९ मा उनलाई भारत सरकारले पद्म श्री पदकबाट सम्मान पनि गरिसकेको छ । उनको पूरा नाम ब्रह्मानन्दम कन्नेगान्टी हो र उनी सन् १९५६ फेब्रुअरी १ मा जन्मिएका हुन् ।
उनले ‘मोद्दाबाइ’ नामको नाटकमा अभिनय गरिरहेको बेला तेलेगु निर्देशक जन्धयालाले पहिलोपटक देखेका थिए । उनको अभिनयबाट प्रभावित भएर जन्धयालाले ब्रह्मानन्दमलाई ‘चन्ताबाबाइ’ मा एक सानो भूमिका दिएका थिए । यसपछि ब्रह्मानन्दमले कहिले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।
उनी धेरै फिल्ममा अभिनय गरे र सम्पत्ति पनि कमाए । भारतीय समाचारमाध्यमका अनुसार आज उनी ५१२ करोड रुपैयाँका मालिक हुन् ।
उनीसँग अडी आर ८, अडी क्यू ७, मर्सिडिज बेन्ज र इनोभा जस्ता महँगा गाडी छन् । यसबाहेक उनीसँग करोडौं रुपैयाँको जग्गा र हैदरावाद नजिकै जुब्ली हिलसमा एक भव्य बंगला पनि छ। उनले एक फिल्ममा काम गरेवापत करिब १ करोड भारु लिन्छन्।